होमपेज / नागरिक शनिबार / सार्कबाट घेरिँदा
सार्कबाट घेरिँदा	18 May 2013 ४ जेष्ठ, २०७०
राजेन्द्र ज्ञवाली	Be the first to comment! 12345 (1 Vote)
मेरो टाउकोको ठीकमाथि लगभग चार फुटको सार्क आइसकेको थियो। मैले दायाँतर्फ नजर घुमाएँ, अलि परबाट लगभग त्यत्तिकै ठूलो अर्को सार्क आइरहेको थियो। अनि बायाँतिर पनि त्यस्तै। म लगभग सार्कले घेरिएको अवस्थामा थिएँ। तस्बिर तथा फिल्ममा मात्र देखेको सार्क मैले पहिलोपटक नजिकैबाट, त्यो पनि तीन–तीनवटा, हेर्न पाउँदा रोमाञ्च अनुभव भएको थियो। मेरोअगाडि जम्मा भएका हजारौं साना माछाले केहीबेरमै अजंगको आकार बनाए। टाउकोमाथि रहेको सार्कको ध्यान तिनै साना माछातिर जाला भन्ने सोचमा थिएँ, तर त्यो सार्कले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान मतर्फ केन्द्रित गर्दै थियो। त्यत्तिकैमा हजारौं साना माछा मेरोअगाडि जम्मा भइरहेको देखें। केहीबेरमै उनीहरूले एउटा अजंगको आकार बनाए। समुद्रमा स–साना माछाले सार्कलगायत ठूला जलप्राणीबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन एकै ठाउँ जम्मा भएर ठूलो आकार बनाउने गरेको सुनेको थिएँ। मेरो दायाँ र बायाँतर्फबाट आइरहेका सार्क नजिकै पुगिसकेका थिए। मेरो टाउकोमाथि रहेको सार्कको ध्यान मतर्फ नै थियो। स–साना माछा मेरो ठीकअगाडि जम्मा भएको देखेपछि टाउकोमाथि रहेको सार्कको ध्यान पनि उतै जाला भन्ने सोचमा थिएँ तर त्यसो भएन। त्यो सार्क मलाई नै हेरिरहेको थियो। मैले माथि हेरें। उसले पुच्छर अनौठो प्रकारले हल्लाउँदै आफ्नो पूर्ण ध्यान मतर्फ नै केन्द्रित गरेको जस्तो लाग्यो। मैले तलतिर हेरे। मेरा दुवै गोडा वरिपरि र मुन्तिर पनि साना/ठूला अनेकौं माछासँग दुई चार वटा सार्क स्वच्छन्द पारामा विचरण गरिरहेका थिए। मैले नजिकैका साथीहरू बोलाउन खोजें। अलि पर रहेका दिवाकरको ध्यान मतिर थिएन। त्यस्तै थकित जस्तो देखिएकी मनिता केही परको काठको टुल जस्तोमा बसेकी थिइन्। अनि चोपलाल भने समुद्री प्राणीहरूको अनौठो क्रियाकलाप पूर्णरूपमा क्यामेराको बन्धनमा बाँध्न तल्लीन थिए। उता सुनिल मजस्तै सार्क र अन्य माछाबाट घेरिएको देखें। उनको स्थिति पनि मजस्तै अनौठो थियो। कहिले आफ्ना वरिपरि जम्मा भएका समुद्री जीव हेर्थे, कहिले हामी सबैतर्फ नजर घुमाउने गर्थे।मैले आफ्नो दाहिने हात उठाएर टाउकोमाथि रहेको सार्कलाई छुने प्रयास गरे तर सम्भव भएन। किनभने बीचमा सिसाको पर्खाल थियो। सिसाको त्यो पर्खाल हाम्रो तल–माथि चारैतर्फ थियो। सिसाको पर्खालयता हामीहरू थियौं अनि उता ती समुद्री जीव। हामी वास्तवमा एउटा लगभग प्राकृतिक एक्वेरियमभित्र थियौं। २०६९ साल कात्तिकमा अमेरिकाको पोर्टल्यान्डमा समाचार संकलन गर्न गएको थिएँ म। त्यही अवसरमा त्यहाँ तेक्वान्दो स्कुल सञ्चालन गरेर बसेका नेपाली दिवाकर डान महर्जनले लगभग चार, साढे चार घन्टाको मोटर यात्राको दूरीमा रहेको न्यु पोर्टमा दुई दिन घुम्ने योजना बनाएका थिए। हामी त्यहीँ गएका थियौं। अनि न्यु पोर्ट पुगेको अर्को दिन त्यहाँबाट मोटरमा लगभग ३० मिनेटको दूरीमा रहेको ओरेगन कोस्ट एक्वेरियम घुम्न गएका थियौं। त्यो एउटा विशाल एक्वेरियम थियो, निकै ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको। त्यसभित्र पस्नासाथ समुद्रभित्र भएको अनुभव हुन्थ्यो। ठाउँ–ठाउँमा सिसाको ठूलो हलजस्तो थियो। र, प्रकृति कस्तो भने त्यहाँ हेर्न आउने दर्शक सिसाको घरभित्र अनि समुन्द्री जीव भने बाहिर आफ्नो प्राकृतिक वातावरणमा भएजस्तो। दिवाकरसँगै म अनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सदस्य सुनिल राजकर्णिकार, तेक्वान्दो खेलाडी मनिता सिंह, युकेबाट आएका अर्का तेक्वान्दो खेलाडी चोपलाल बन्जाडे प्राकृतिकजस्तै लाग्ने एक्वेरियम हेर्न आएका थियौं। एक्वेरियम हलभित्र छिर्ने मूल प्रवेशद्वारमै हामीले संयुक्त तस्बिर खिचाएका थियौं। तस्बिर लिनेले भनेका थिए– तिमीहरू फर्केर आउँदासम्म हामीले तस्बिर फ्रेममा राखेर तयार पारिसक्ने छौं।प्रवेशद्वारभित्र छिर्नासाथ हामीलाई रहस्यमय नयाँ संसारमा आएको अनुभूति भएको थियो। समुद्री संसार, जहाँ जलचरहरूको राज्य थियो। उनीहरू प्राकृतिक वातावरणमै जलमा विचरण गरिरहेको हेर्न पाउनु वास्तवमा निकै अनौठो र सुखद् अनुभव हुन पुगेको थियो। भित्र एक ठाउँमा समुद्रको सानो रूप देखाइएको थियो। जहाँ टेबल टेनिस बल, जुत्ता, टेनिस बल खाली सिसीजस्ता प्रयोग गरिसकिएका वस्तुहरू बग्दै गरेको देखिएका थिए। मैले त्यसको प्रयोजनका बारेमा जिज्ञासा राख्दा त्यहाँका एक अधिकारीले यो साना नानीहरूलाई नचाहिने सामानहरू झिकेर राख्नका लागि गरिएको व्यवस्था भएको बताए। 'यसले गर्दा नानीहरूमा फोहोर वस्तु जथाभावी फाल्न नहुने ज्ञान सानो उमेरबाटै हुन्छ'– उनको कुरा मलाई चित्त बुझेको थियो। त्यत्तिकैमा १५ जनाको एक समूह त्यहाँ आइपुग्यो। हामी चलचित्रको पर्दा जस्तो ठूलो सिसाअगाडि आइपुगेका थियौं। सिसापारि समुद्री जीवहरू निस्पि्कक्री घुमिरहेका थिए। अगाडि एउटा बेन्च थियो। त्यहीँ त्यो समूहका १४ जना नोटबुक र कलम लिएर बसे। अनि एक जना पाका उमेरका (उनी कुनै कलेजका प्रोफेसर भएको थाहा भयो) व्यक्तिले समुद्री जीवनबारे ती विद्यार्थीलाई जानकारी गराउन थाले।त्यो एक्वेरियमलाई 'लिभिङ क्लासरुम' का रूपमा जानिँदोरहेछ। त्यहाँ वर्षेनि ४० हजार विद्यार्थी समुद्री जीवनबारे जानकारी लिन आउँदा रहेछन्। त्यो एक्वेरियम समुद्री जीवको सुरक्षाका लागि महŒवपूर्ण मानिँदो रहेछ। त्यो अमेरिकाकै प्रमुख दस एक्वेरियमभित्र पर्दो रहेछ।लगभग दुई घन्टा जतिको घुमाइ हामी सबैका लागि निकै जानकारीमूलक थियो। थरीथरीका रंगिन माछा, समुद्रमा हुने वनस्पति अनि ती समुद्री जीवको स्वच्छन्द विचरण! त्यो एउटा बेग्लै संसार थियो हाम्रा लागि। एक्वेरियमको सिसामा छुँदा समुद्री जीवले रोकेर अनौठो पारामा हामीतिर हेर्ने गर्थे। त्यत्तिकैमा तीन जना गोताखोरको पोसाक लगाएकाहरू एक्वेरियमभित्र देखिए। उनीहरू पनि ती समुद्री जीवसँगै पानीमा विचरण गरिरहेका थिए। एक जनाले एक्वेरियम हेर्न आएका हामी सबैलाई हात हल्लाएर अभिवादन गरे। हामीले त्यसको जवाफ दियौं। उनीहरू एक्वेरियमलाई भित्रबाट सफा गर्न आएका रहेछन्। यसबाहेक समुद्री जीवलाई नजिकैबाट हेरचार गर्ने जिम्मा पनि उनीहरूको रहेछ। एक्वेरियम बाहिर जमिनमा पनि बस्ने केही समुद्री जीवका लागि बास स्थान बनाइएको रहेछ। सबै समुद्री जीवलाई पूर्णरूपमा प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध गराइएको थियो। एक्वेरियमको अवलोकन गर्न आउनेहरूबाट समुद्री जीवहरूलाई कुनै किसिमको अवरोध उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि नै बीचमा निकै मोटो सिसाको पर्खाल बनाइएको थियो। हाम्रो लगभग साढे दुई घन्टाको घुमाइले पनि एक्वेरियम र त्यस वरिपरिको क्षेत्र पूर्णरूपमा भ्याउन सकेनौं। फर्कने बेला काउन्टरमा एक युवती हामीले खिचाएको तस्बिर फ्रेममा राखेर पर्खिरहेकी थिइन्। हामी सबैले चिनोका रूपमा तस्बिर लियौं र न्यु पोर्ट फर्कियौं। Tweet Leaveacomment Message *
भाषाको भाँडभैलोएकपटक महान् दार्शनिक कन्फ्युसियसलाई कसैले सोधेछ, ‘तपाईं शक्ति केन्द्रमा पुगेपछि पहिलो काम के गर्नुहुन्छ?' उनले सहजै भनेछन्, ‘भाषाको भाँडभैलोलाई सुधार गर्छु।' कत्रो भाषाप्रेम, आज सम्भि्कँदा पनि कताकता मन द्रवीभूत र...	सांस्कृतिक सम्पदामा बिम्वखोप्रिङ्, ख्वप, भक्तपुर, भादगाउँ विभिन्न नामले चिनिने भक्तपुर नगरमात्र होइन; भक्तपुर जिल्ला नै मानव इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिको बेजोड निधि हो। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन प्रमुख नगरमध्ये जिउँदो सांस्कृतिक परम्परा र...	म सम्झूँ कसोरी?अस्ति भर्खर जुन गल्ती हुन गयो भन्ने बोधले झिल्सिँदै छु, अर्कोपटक पनि त्यस्तै गल्ती गर्छु कि भन्ने भय छ। दोस्रोपटक पनि त्यही गल्ती भयो भने म झिल्सिने मात्र होइन, पूरै...	आवरण कथा: ‘भूपि युगका स्रष्टा’हामी आफूखुसी कहिल्यै मिल्न नसक्नेकसैले मिलाइदिनुपर्ने,हामी आफूखुसी कहिल्यै छुट्टिन नसक्नेकसैले छुट्ट्याइदिनुपर्ने,हामी आफूखुसी कहिल्यै अगाडि बढ्न नसक्नेकसैले पछाडिबाट हिर्काउनुपर्ने, हिँडाउनुपर्नेहामी रङ–रोगन छुटेकाटुटेका, फुटेकापुरानो क्यारमबोर्डका गोटी हौंएउटा मनोरञ्जक खेलका सामग्री,एउटा खेलाडीमाथि आश्रित,आफ्नो...	मच्छेगाउँ घुम्ने मौकाभगवान् विष्णुका दस अवतारमध्ये मत्स्य अवतार प्रथम हो। हयग्रिव दानवले वेदादि शास्त्र चोरेर पातालमा लगेपछि त्यसलाई फिर्ता ल्याउन विष्णुले माछाको रूप धारण गरेका थिए। तिनै मत्स्य नारायणको मन्दिर काठमाडौंको मच्छेगाउँमा...	बरी, बम्बैया र ज्याकरन्डाएक तला भर्यावङ उक्लेर हिमालयन जाभाको हलभित्र पसेँ। पूर्व कुनाको सोफामा बसेकी युवती निस्पि्कक्री चुरोट तान्दै थिई। उसको काँधमा ह्यान्डलूमको फरियाको चौडा सप्को शबाना आजमी स्टाइलमा अडेको थियो। चुरोटको धुवाँ...	राप्ती किनारमा कवितासाहित्यिक फाँटमा चितवन उर्बर बन्दै गएको छ। मदन पुरस्कार र पदमश्री पुरस्कार विजेता लेखक अमर न्यौपाने र मदन पुरस्कार विजेता राधा पौडेलको घर चितवनै हो। साथै भूपिनले उत्तम शान्ति पुरस्कार...	ओफुरोमा चोपिइएको कलमआमाको ढाड दुखेर कुप्री पर्नुभयो। हिँडडुल गर्न पनि अरूको सहारा चाहिने भयो। दाइहरू मभन्दा अलि ठूला नै थिए तर घरायसी काम छोरीको भन्ने धारणा हाम्रो घरमा पनि थियो। म कान्छी...	नागरिक शनिबार	एउटा पुरानो छापामार'हान्ने राँगोजस्तै भएर आइस् नि? आँखा पनि राता न राता छन्! के भो तँलाई ए शंकर?'फलैँचामा...	दुइटा नाक भएका मान्छेम उनलाई सम्झाइरहेको थिएँ, छोरीको बिहामा फजुल खर्च गर्नु हुन्न।मेरो कुरामा सहमति जनाउँदै ती वुज्रुगले भने,...	मेरो रंगयात्रामा सर्वनामतीस–एकतीस सालतिरको धनकुटा। गोकुण्डेश्वर हाइस्कुलको सानो हलमा नियमित नाटक मञ्चन गर्थ्यौं। टिकटमा नाटक मञ्चन हुने परम्परा...	भाषिक अव्यवस्थाकुनै गलत कुरालाई धेरै पटक दोहोर्यािएर सत्य प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रयासमा कतिपय मानिस लागिरहेका हुन्छन्। यहाँ...	भर्खरै...